ကြွေးဟောင်းဆပ်ခွင့်ပြုပါမေမေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကြွေးဟောင်းဆပ်ခွင့်ပြုပါမေမေ
Posted by manawphyulay on Aug 24, 2011 in Creative Writing, Poetry | 12 comments
သမီးကို ကျေးဇူးဆပ်ခွင့်ပြုပါ မေမေ…
အမ ကဗျာလေးကိုဖတ်ပြီး စိတ်ထဲမှာ အရမ်းကို ‘ ဟာ’ သွာပါတယ်အမရယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ ညီမလေးက နယ်ကနေလာနေတာပါ တစ်နှစ်တစ်ခေါက်ကိုတော့ အမေ ရှိတဲ့မွေးရပ်မြေကိုပြန်ဖြစ်ပါတယ် အမေကတော့
ညီမလေးတို့မောင်နှမတွေကို အစစအရာရာ အဆင်ပြေအောင်အမြဲတမ်းစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့ပါတယ် ဒါပေမဲ့
ခုချိန်ထိ အမေ့အတွက် ညီမ မပေးဆပ်ခဲ့ဖူးသေးပါဘူး အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး အမကဗျာလေးကိုဖတ်မိတဲ့အချိန်မှာ အမေ့အတွက်ပေးဆပ်ရမှာတွေအရမ်းများများကျန်သေးတယ်ထင်တယ်နော် အဲဒီအတွက် ညီမ အရမ်းကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးရင်းဖြစ်မိပါတယ်။
စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့ ညီမလေး… ဒီလို အသိရှိနေရင်ကို အမေ့အတွက် ပေးဆပ်မှုတစ်ခုပဲလို့ အမေက သဘောပေါက်နေမှာပါ။ နောက်တစ်ချက်က မိဘတွေ ရှိနေချိန်မှာ မိဘတွေကို ပြုစုစောင့်ရှောက်စေချင်ပါတယ်။ မိဘဆိုတာ မသေခင်လုပ်ကျွေးပါတဲ့ သေမှ မငိုပါနဲ့ဆိုတဲ့ စာသားလေးကို အမြဲလက်ကိုင်ထားပြီး ဘယ်လောက်ပဲဝေးဝေး ဖုန်းလေးပဲဆက်ဆက်၊ စကားလက်ဆောင် အမြဲပါးနေလိုက်ပါညီမလေး…..
လေဖြတ်ဝေဒနာကိုခံစားရင်း အခုတော့ဆုံသွားတာ ၃နှစ်ရှိပါပြီး
လေဖြတ်နေတဲ့ကြားက ကျွန်တော် အင်္ကျီလေးတွေ မီးပူတိုက်ပေးနေတဲ့ပုံရိပ်ကို
ဆုံးပြီးတဲ့ တစ်လလောက်အထိ အိမ်နောက်ဖေးကကြွက်တိုးလို့ အိုးသံပန်းကန်သံကြားရင်တောင်
အမေများနောက်ဖေး ထမင်းချက်နေတာလားလို့ ယောင်ပြီး ထထကြည့်မိတာ
မိဘကိုတော့ တစ်သက်မဟုတ်တောင် တမနက်တခဏ လောက်ဖြစ်ဖြစ် ခြေဆုပ်လက်နယ်
အမေက ပြောတယ် ကြွေးဟောင်း မဆပ်ချင်နေပါ
ကြွေးသစ် ထပ်မယူရင် တော်ပါပြီတဲ့
(အဲဒီလို ပြောပြီးမှ ထပ်ထပ်ပေးမိတာလဲ များနေပြီ တဲ့)
သြော်….. မိဘ နှစ်ပါး သက်ရှိ အထင်အရှား ရှိနေဆဲ… ငါမေ့လျော့ပေါ့ဆ နေမိပါလား….
မ မနော ကယ်လိုက်သလိုပါပဲ… ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ…
မေမေ့ကိုရော ဖေဖေ့ကိုရော ကျေးဇူးဆပ်ပါ့မယ် ၊
သားတို့ ရုပ်ရည် သီတာမည်သား ရေကြည် စမ်းမြတပေါက်ကျက မိဘတို့ ဝမ်း ငြိမ်းစတမ်း ပါတဲ့။အမေ ရေ အမေ့ အတွက်သတိရလွမ်းဆွတ်ခြင်းတွေတပွေ့ တပိုက်နဲ့ဒီတစ်နွေရုံးပိတိရက်မှာတော့ အမေ့ကို ခြေဆုပ်လက်နယ်ပေးဖို့ ပြန်ခဲ့ပါမယ် အမေ။မမ မနောရေ ကျေးဇူးပါနော်။xie. Xie
အမေလဲ မချိ..အဖေလဲ မချိ..
အကြွေးဆပ်ဖို့ …အာရုံဖမ်းလို့ ကို မမိ..
ဆပ်စရာ အကြွေးဆိုလို့ရွာထိပ်က ဘီအီးအကြွေးပဲ ရှိ
မေမေ့ကို ကန်တော့ချင်လို့ 
(ကောင်းရာကောင်းကြောင်း ပြောနေကြတဲ့ အချိန်..သိုင်းကွက်နင်းပြီး ၀င်လာမိတဲ့အတွက် အားလုံး တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျ။)
ဆပ်ဆပ်၊ အတိုးလည်းပေးဖို့ မမေ့နဲနော်။
အလုပ်ကလေးရှိတာလည်း ရတဲ့လခ ကိုယ်ပိုင်ငွေလိုသဘောထားနေတာဆိုတော့…..။
အချို့သော သူများကလွဲလို့ အများအားဖြင့်တော့ ကြွေးဟောင်းကို ဆပ်ချင်နေကြသူတွေပါ ..
ဒါပေမယ့် .. လက်ရှိ ကြွေးသစ်တွေ ချနေရတာရယ် .. ငါ့ဝမ်းပူဆာ တာရယ်ကြောင့်သာ
ကြွေးဟောင်းတွေက မေ့နေတဲ့ အစိတ်အပိုင်းကို မရည်ရွယ်ပဲ ရောက်သွားကြတာ မဟုတ်လား